ZTE dia hanolotra amin'ny fomba ofisialy Acon 9 ao amin'ny IFA 2018 | Androidsis
Eder Ferreño | | IFA, About us, ZTE
2018 no mety ho taona sarotra indrindra ho an'ny ZTE amin'ny tantarany. Saingy miverina tsikelikely amin'ny ara-dalàna izy ireo, ary afaka mifantoka amin'ny famokarana telefaona vaovao, izay no tadiavin'izy ireo. Toa tsy hiandry ela intsony isika mandra-pahatonga ilay telefaona vaovao an'ny orinasa. Satria hanolotra telefaona vaovao amin'ny IFA 2018 izy ireo.
Tamin'ny alàlan'ny tambajotra sosialy dia namoaka hafatra ny orinasa izay nanambaran'izy ireo ny fisian'izy ireo tamin'ilay hetsika tany Berlin. Tsy voalaza ao izay maodely hatolotr'izy ireo amin'ity hetsika ity, na dia mampiseho ny endrik'ilay telefaona aza i ZTE amin'ity afisy ity.
Ny anaran'ny telefaona hasehon'ny marika sinoa dia mbola tsy navoaka. Na dia vinavina aza fa io no Axon 9 ny nomeraon-telefaona izay hihaonantsika amin'ity hetsika ity. Na dia tsaho aza izany dia mbola tsy voamarina hatreto.
Ankoatra izany, ZTE dia efa nandefa fanasana ho an'ny olona amin'ity hetsika ity. Ary amin'izy ireo dia aseho isa 9. Noho izany ho an'ny maro dia ny fanamafisana ilaina izany, ary toa mazava fa ny Axon 9 no ho maodely hatolotra amin'ity IFA 2018. Tsy isalasalana fa fampirantiana tsara io.
Tamin'ny fiandohan'ity taona ity dia nanamafy ny fanombohana ity fitaovana ity ny Tale jeneralin'ny ZTE. Na dia taorian'ny olana maro niainan'ny orinasa aza tato anatin'ny volana dia tsy dia fantatra loatra ny fivoarany. Nefa toa toa vonona hamoaka azy ireo ihany izy ireo amin'ny farany.
Manomboka amin'ny 31 Aogositra dia ho hitanao izay rehetra nomanin'i ZTE. Hanana booth ny orinasa amin'ny hetsika malaza any Berlin. Noho izany, azo inoana fa hamela antsika vaovao maro izy ireo, ankoatr'ity Axon 9. Hihaino tsara kokoa ny vaovao hahatratra antsika isika amin'ny andro ho avy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » ZTE » ZTE dia afaka mampiseho ny Axon 9 ao amin'ny IFA 2019
Ny varotra Google Home dia mitombo 449% amin'ny telovolana faharoa amin'ny taona